Ndị ọkachamara na Semalt na-ekpughe eziokwu nke SEO ugbu a
Taa ọtụtụ ndị ụlọ ọrụ amaghị nke ọmaotú ha nwere ike isi tinye SEO n'ikpeazụ, mee ka ọ bụrụ ihe dị mkpa nke nkwado ha na azụmahịa. Ebe ọ bụ na usoro SEO nwereenweta nkwado, ụdị na-agbali mbọ iru ọkwa kachasị elu na nsonaazụ ọchụchọ iji bulie visibilite ha na ebe nrụọrụ weebụ.Ma, nsogbu ahụ bụ na SEO na-eje ozi ọ bụghị nanị na nke a mana ọnụ ọgụgụ ahịa ahịa ndị ọzọ.
SEO na-enwe mgbanwe dị ịrịba ama kemgbe nke aemeela ihe omume, ma ihe ka ọtụtụ n'ime isi ihe ndị dị na ya ka dị otu. Site na ịghọta eziokwu nke SEO, otukamakwa ụlọ ọrụ nwere ike ịghọ ezigbo uru.
Igor Gamanenko, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọcha ,Ọrụ Ntanetị, na-akọwa eziokwu ndị bụ isi gbasara SEO, dị mkpa maka taa na ọdịnihu dị nso
Ihe ndị bụ isi bụ Critical
Nyocha kachasị dịka ọ dị mkpa dị ka ọ na-eme ka o doo anyaa ga - achọta ebe nrụọrụ weebụ site na search engine. Ma ọ na-elekwasị anya karị na mgbasa ozi nke oge a. Ahịa mgbasa ozi na ịkwado ahịateknụzụ enwetawo ego site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-arụ ụlọ n'ihi na ha nwere ike ịdaba na ọsọ. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime ndị dịweebụsaịtị ha ka na-enwe oke oru uzo di iche iche ka ndi agha kwesiri ichogharia ma gbanwee ibe ha. Na nke a, nkọwa nke onwe ya,isi ihe na peeji nke, URLS dị irè, na mkpado aha ya bụ isi, nke dị oké egwu maka SEO dị mma
Uru bụ Eze
"Uru bụ Eze" bụ nkà ihe ọmụma nke mmadụ n'otu n'otuna SEO ụwa na-agụrụ onwe ha na ndị ahịa ha afọ iri gara aga, ma ọ ka dị irè taa. Nkà ihe ọmụma dabere naarụ ụka na ịmepụta ọdịnaya adịghị mkpa na-eduba n'inwekwu aka na ịzụ ahịa. N'ihi ya, ndị ọkachamara SEO nandị nwere ike ịkwesịrị ịkwado echiche iji hazie ọdịnaya nke bụ ndị ahịa. Ndi otu a kwesiri ijikoro usoro ozonwee ihe ịga nke ọma n'otu ụlọ ọrụ.
Platforms dabeere na weebụ bụ Social
Na mmalite afọ 2000, òtù SEO nwere mmasị iji mmekọrịta mmadụ na ibe yamgbasa ozi iji mee ka ọkwa dị elu. N'agbanyeghị eziokwu ahụ na profaịlụ mgbasa ozi na-enye aka na mmepe nke engines ọchụchọ, yaka ọ ga-enye gị nkwụsị aka. Ọ na-adọrọ mmasị ịhụ otú mgbasa ozi mgbasa na mgbasa ozi si arụ ọrụ dị mkpaeme ka akara aka site na engines enyocha. N'okwu dịgasị iche iche, ụdị ejiwo mgbasa ozi ọha na eze gbaa ndị ahịa ume ịchọ ihesite na engines ọchụchọ. Ya mere ozugbo enwere ike ịzụ ahịa ndị na-ede blọgụ na nri ndị yiri ya, ọ bụ ụzọ kasịsị mma isi bulienjirimara nke ndi mmadu bu ihe ndi mmadu kwesiri ntukwasi obi n'uwa.
SEO bụ Mgbakwunye na Mgbasa Ozi
Na-akpakọrịta SEO na ụfọdụ ụdị mgbagwoju anya metụtaranaanị njikarịcha isiokwu dị ogologo. Ugbu a, SEO na-egosi na a na-emepụta mgbasa ozi, na-etolite oge ịkwalite usoro ikpo okwueduzi mkparịta ụka ejiri aka. Na nke a, a na-etinyekarị òtù SEO kachasị elu na ngalaba mgbasa ozi. Ọnke pụtara na SEO na-eje ozi dị ka ahịa, nke na-ebute ROI na nurturing brand equity.
Ijide ọkwa kachasị elu na nchọta ọchụchọ chọpụta naakara gị na-atụkwasị obi na -emepụta okporo ụzọ dị mma nke na-eme ka ọ nwee ike ịmegharị ndị ọbịa weebụ gị gaa ahịa. Mgbe ị nwetaihe ndị a dị elu ka na-abụ nnukwu ihe ịma aka, ọrụ ndị ọzọ SEO na-enye chọrọ itinye usoro ọhụrụ Source .